Lahatsary Avy Amin’ny Drôna, Mampibaribary Ny Fandoroana Tsy Ara-Dalana Ny Tany Fambolena Voanio Fakàna Menaka Any Indonezia · Global Voices teny Malagasy
Lahatsary Avy Amin'ny Drôna, Mampibaribary Ny Fandoroana Tsy Ara-Dalana Ny Tany Fambolena Voanio Fakàna Menaka Any Indonezia
Voadika ny 30 Septambra 2016 13:13 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, 繁體中文, Aymara, 简体中文, English
Pikantsarin'ny tany fambolena voanio fanao menaka nodiovina tamin'ny fandoroana tao Indonezia. Avy amina Lahatsary Drona nampakarina ao amin'ny YouTube ny sary.
Lahatsary iray nalaina drôna no naka ny fidadasiky ny fahamaizan'ireo voanio fanao menaka sy ny fanadiovana ny tany ao amin'ny faritra andrefan'i Indonezia. Heverina ho anton'ny zavon-tsetroka izay mandrakotra isan-taona an'i Singapore, Malezia, ary Indonezia ilay fandoroana ny tany.
Ampahany tamin'ny fanadihadiana iray nataon'ny Eyes on the Forest ao Indonezia (EOF) ny fandefasana drôna, fiaraha-mientan'ireo vondrona telo mpiaro tontolo iainana, izay naorina tamin'ny 2004 mba handalina ny doro ala matetika mitranga.
Araka ny EOF, voaporofon'ilay lahtsary fa 3.000 hektaran'ny tany lazaina fa fananan'ny orinasa mpamboly Andika Permata Sawit Lestari (APSL) no ‘niniana nodorana’.
Afaka ampiasana ho porofo fanampiny manenjika ilay orinasa ny lahatsary, izay miatrika fiampangana amin'ny fibakoavana tany sy fiasana tsy misy fahazoandàlana.
Tato anatin'ny volana vitsy, nanamafy ny ezaka ataony hampitsaharana ny fandoroana ala ao Riau ny governemanta Indoneziana, ny ‘Teboka Aotra’ fiaingàn'ilay zavona mahatsiravina. Ary nivoady hanenjika ireo orinasa tomponandraikitra amin'ny doro ala izy. Nandrisika ihany koa an'i Malezia sy Singapore izy mba hanadihady ireo orinasa any amin'ny fireneny izay mamatsy vola ny fanitarana ny fambolena voanio fanao menaka ao Indonezia.
Teny am-piandohan'ity volana ity, mpiasa fito ao amin'ny minisiteran'ny tontolo iainana ao amin'ny governemanta nanadihady ny tranga fandoroana iray no nisy vondron'olona maro naka an-keriny azy ireo, olona noheveriny ho mpiasa avy aminà orinasa iray mpamboly. Navotsotra izy ireo rehefa niditra an-tsehatra ny polisy ary rehefa nofafàn'izy ireo ihany koa ny sary sy ny lahatsary izay noraketina tao amin'ilay faritra.
Niteny ny EOF fa nohamafisin'ny lahatsary drôna ny zavatra nohadihadian'ireo mpiasa.
Raha mbola tohizan'i Indonezia ny fitsapany mikasika ilay olana, mitohy kosa mamely ireo firenena sy ny manodidina azy ilay zavon-tsetroka.
Jero ilay lahatsary drôna izay mampibaribary ny fandoroana ny tany ao Indonezia: